Muuri News Network » XOG: MD Farmaajo oo Muqdisho ugu yeeray Mukhtaar Roobow & Arrimo culus oo wax laga weydiinayo
XOG: MD Farmaajo oo Muqdisho ugu yeeray Mukhtaar Roobow & Arrimo culus oo wax laga weydiinayo
Feb 26, 2018 - Comments off
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wax ka weydiineysa sida looga hortagi karo loona fashilin karo weerarada Al-Shabaab ee isugu jira Qaraxyada tooska Wadaadka wada hadalka kula jira Dowladda Federaalka Sheikh Muktaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Ilo xog ogaal ah oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu hadda Muqdisho ugu yeeray Mukhtaar Roobow si wax badan kagala hadlo xaaladda Amaan ee dalka iyo Qorshihiisa dagaal eek u aadan Ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale,Ilaha xog ogaalka ah ayaa inoo sheegay in madaxweyne Farmaajo sidoo kale,Mukhtaar Roobow wax ka weydiinaya qibradiisa Qaraxyada shabaab maleegaan qaabka ay u maleegaan iyo sida looga hortagi karo.
Wadaadka oo hadda ku sugan magaalada Baydhabo ayaa laga filayaa in maalmaha soo socda uu soo gaari doono magaalada Muqdisho si uu ula kulmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Amaanka ayaa wadaadka ayaa waxaa qaabilsan Ciidamo si gaar ah u tababaran oo ay u xilsaartay Dowladda Soomaaliya.